1. Sei kurasikirwa kumeso uremu Izvo zvakakosha kuti tibatsire kumeso kwedu kutaridzika kutetepa uye chimiro, pamwe nemusuwo kune moyo unotaurira vanhu vakakukomberedza kuti unozvitarisira zvakadii. Saka vanhu vazhinji vanoedza kutsvaga nzira yekudzora huremu hwemeso hunoshanda. Asi kusvika ipapo!?! Chiso chakazvimba, chakatenderedza kumeso, shama matama, mutsipa wattle ichagara nesu kwenguva yakareba. Kusvika zvichikonzera kunetsekana kwevakadzi Ndiani anoda kurasikirwa nehuremu hwemeso zvishoma Asi nhasi ndinogona kukuudza izvozvo Iwe unongoziva kurasikirwa uremu kumeso (Kurasikirwa nehuremu kumeso) kwatinounza nhasi. Chiso chako chichava chitete Kusvikira iwe pachako waona
2. Deredza kudyiwa kweakareruka makabhohaidhiretsi senge mupunga muchena, shuga yakanatswa, zvinwiwa, ice cream, nezvimwe, pamwe nezvikafu zvakagadzirwa. Ndeipi ichave iine yakakwira mwero we sodium Kukonzera edema pane zvese muviri nemeso Kana ndiani acharasikirwa nehuremu hwemeso nekudya yakaderera-carb (Yakaderera-Carbs Kudya) ndeyekuganhurisa yakakwira-carb chikafu. Uye tendeuka kune yakaderera-carb kudya kwemazuva gumi nemana chete akateedzana, isu tichatanga kuona mhedzisiro yechiso uremu hwekuremerwa zvakanyanya.
3. Exercise zvese nhengo dzemuviri Iwo mutemo wechigunwe wekurasikirwa nechiso huremu ndeyekunyungudutsa mafuta akawandisa pachiso chako. Izvo zvatinogona kudzikira kumeso kurema kuburikidza nezviitiko zvinotora simba kubva kune yakawandisa mafuta Nekuenderera mberi kwekurovedza muviri maminitsi gumi nemashanu zvichienda mberi Pakurova kwemoyo kwe130-150 kurova paminiti, izvo zvinobatsira kupisa zvakawandisa mafuta emuviri nematama zvakanyanya. Kana yaitwa kwemazuva makumi matatu anoteedzana pamwe chete nekudyiwa kwemakabohydrate. Izvo zvichatibatsira isu kurasikirwa nemeso uremu zvinobudirira.
4. Yoga yeFace Fat Kupisa Cheek Mafuta Iyo nzira iri nyore kwazvo yekudzora huremu hwemeso. Isu tinongoita muromo, zvidhoma, matama nemiromo. Wobva wadzosera musoro wako kumashure. Nekutambanudza mutsipa nechirebvu, kutarisa padenga nekuita kwemaminitsi gumi, gumi neshanu zuva nezuva, mangwanani uye usati warara kwemazuva makumi matatu uchienderera mberi, zvinobatsira kudzikisa huremu hwemeso zvakanyanya.
5. Kusimbisa masaja Iyi nzira yekudzora kumeso kurema. Isu tinongoshandisa yekumeso yekumasaini michina inosanganiswa nekirimu mangwanani uye nguva yekurara. Ingo zora kirimu 5 yakakosha mapoinzi kumeso pahuma, matama, mhino, chirebvu uye wozoshandisa zvigunwe zviviri pachirebvu. Nongedza uye isa matembere kumativi ese maviri. Wobva washandisa chigumwe chako zvishoma nezvishoma Knead iyo kumusoro muV-chimiro. Zvino, ichisvika pamatama, yakakwenya zvakanyanya kusvika pahuma. Wobva washandisa chigumwe chako zvishoma nezvishoma Massage kusvika kune iro bvudzi. Iyi nzira inyanzvi inoda kuti tidziye matama. Kubatsira kusimbisa matama edama uye kubatsira kudzikisa huremu hwemeso.
6. Sei kurasikirwa nehuremu hwemeso, tinounza nhasi. Hazvisi izvo zvakaoma, handiti? Chero ani ane dzimwe nzira huru, usakanganwe kuzevezera kuti uudzewo mumwe. Hmph !! Nekuti isu ticharasikirwa nehuremu hwemeso pamwechete ^^ hehe ^^